Tag: chiito-pane software | Martech Zone
Tag: chiito-pane software
Kushambadzira kwemazuva ano kushambadzira kwedigital. Hupamhi hwayo hupamhi hunowedzera uye hwakawanda maitiro, inotungamira chizvarwa uye nzira dzekurera, uye yevatengi lifecycle optimization uye mapurogiramu ekukurudzira. Kuti ubudirire, vashambadziri vanoda dhijitari yekushambadzira mhinduro inokwanisa-kupfuma, inochinjika, inoshanda pamwe nemamwe masisitimu uye zvishandiso, intuitive, nyore kushandisa, inoshanda uye inodhura. Uyezve, zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvemabhizimusi pasi rese zvidiki; ndozvakaitawo zvikwata zvavo zvekushambadzira. Nekudaro, yakawanda kwazvo yekushambadzira otomatiki mhinduro haina kugadzirirwa kusangana nezvinodiwa zve